Akụkọ - Otu esi elele ọdịdị nke ịgba agba na-abụghị ọkọlọtọ
Etu esi lelee ọdịdị nke biarin ọkọlọtọ
All ụdị nke n'ibu scars, dị ka abrasions, ọkọ, nsogbu unan, bruises, wdg, ga-eme ka ogbenye amị echichi, ime ka eccentric ibu na nchegbu ịta, na-eme ka a na-ebelata adiana ziri ezi na ọrụ ndụ.
Nrụrụ aka, akpụkpọ ojii, na olulu, nke abụọ a bụ ntụpọ ndị na-adị mfe ịchekwa mmiri na unyi, ma yikarịrị ka ha ga-aghọ nchara. Corrosion bụ isi iyi nke mmetọ nke na-eduga na nrụnye na-adịghị mma, ejiji n'oge na ike ọgwụgwụ. Nchara nchara ga-eme ka biarin gharazie ịdị.
Ihe mgbawa dị iche iche, dị ka mgbawa akụrụngwa, na-agbawa agbawa agbawa, mgbawa ọgwụgwọ ọkụ na egweri mgbawa, wdg, mgbawa ndị a ga-abụ isi iyi nke nrụgide nrụgide ma gbasaa ngwa ngwa n'oge ọrụ nke amị n'ọdịnihu, na-eme ka mgbatị ahụ gbawaa, na-emetụta ndụ eburu ma na-arụ ọrụ nchekwa dị ukwuu. Dịka eziokwu, maka biarin dị mkpa, ụlọ ọrụ na-amị amị arụpụtala 100% magnetik ma ọ bụ nyocha redio na akụkụ ya.
Ntucha na mpịachi, ntụpọ mpaghara nke ntụpọ abụọ a anaghị ejikọtakwa ya na ihe mgbakwasị ụkwụ, ma na-enwekarị mbibi ma ọ bụ mmebi carbon gburugburu ha. Ihe dị mfe ịda, dent, ma ọ bụ eyi, nke na-emebi ibi ndụ na izi ezi.
Ogo nke riveting ma ọ bụ ịgbado ọkụ nke onu, tumadi iji hụ ma isi rivet adịghị mma, gbagọọ, slack, enweghị anụ ma ọ bụ "nkuchi anya abụọ", ma ọnọdụ ịgbado ọkụ ahụ ziri ezi, ma ebe ịgbado ọkụ buru oke ibu ma ọ bụ kwa nke pere mpe, ma obughi welded nke oma ma obu n’elu welded Na-eme ka onu nke ihe ndi mmadu meghariri.